Imizekelo yeZenzo zeMikhali kwiMpilo yemihla ngemihla
Imizekelo yeeMichimo zeMichiza kuBomi bemihla ngemihla
I-Chemistry yenzeka kwihlabathi elikujikelezile, kungekhona nje kwilebhu. Umxholo udibanisa ukuvelisa iimveliso ezintsha ngokusebenzisa inkqubo ebizwa ngokuba yi-chemical reaction or change chemical . Njalo xa upheka okanye uhlambulule, i- chemistry isenzo . Umzimba wakho uphila kwaye uyabulela ekuphenduleni kwamakhemikhali. Kukho iimpendulo xa uthatha imithi, ukhanyisa umdlalo, kwaye uthathe umoya. Nantsi ukujonga kwiimpembelelo ezili-10 kwimihla ngemihla. Ingumzekelo omncinci kuphela, kuba ubona kwaye ufumana amawaka ezinkulungwane zempendulo nganye ngosuku.
I-Photosynthesis yindlela yokwenza ukutya
I-chlorophyll kumagqabi ezityalo ziguqula i-carbon dioxide kunye namanzi kwi-glucose kunye ne-oksijini. UFrank Krahmer / Getty Izithombe
Izilwanyana zisebenzisa i- chemical reaction ngokuthi i- photosynthesis ukuguqula i- carbon dioxide kunye namanzi kwindawo yokutya (i-glucose) ne-oxygen. Ngenye yezona zinto zixhaphakileyo zemihla ngemihla kwaye enye yeyona nto ibaluleke kakhulu, kuba yile ndlela izityalo zivelisa ukutya kwazo kunye nezilwanyana kwaye ziguqula i-carbon dioxide zibe yiksijini.
6 CO 2 + 6 H 2 O + ukukhanya → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2
I-Aerobic I-Cellular Respluence Response Isenzo Ne-oksijeni
UKateryna Kon / iSayensi yeThala leLayibrari / i-Getty Izithombe
Ukuphefumula kwamagciwane e-Aerobic yindlela eyahlukileyo ye-photosynthesis kule mileksi yamandla ihlanganiswe ne-oksijini esiphefumlayo ukuze sikhululwe amandla asetyenziswayo kunye ne-carbon dioxide kunye namanzi. Amandla asetyenziswa ngamaseli yombane yamachiza ngendlela ye-ATP.
Nanku ukulingana okubanzi kokuphefumula kwamaseli aerobic:
C 6 H 12 O 6 + 6O 2 → 6CO 2 + 6H 2 O + amandla (36 ATPs)
Ukuphefumula kwe-Anaerobic kuvelisa iwayini kunye nezinye iimveliso ezivuthayo. Tastyart Ltd Rob White / Getty Izithombe
Ngokuphambene nokuphefumula kwe-aerobic, ukuphefumula kwe-anaerobic kuchaza isethi yeempendulo zamakhemiksi ezivumela iiseli ukuba zithole amandla kuma-molecule anzima ngaphandle kwe-oksijeni. Amaseli akho omzimba aphefumula i-anaerobic breath whenever you exhaust oksijeni enikezelwa kubo, njengokuba kusebenze ixesha elide okanye ixesha elide. Ukuphefumula kwe-Anaerobic ngemvubelo kunye ne-bhakteriya ifakwe kwi-fermentation ukuvelisa i-ethanol, i-carbon dioxide kunye nezinye iikhemikhali ezenza ishizi, iwayini, ibhiya, i-yogurt, isonka kunye nezinye izinto eziqhelekileyo.
Ukulingana kweekhemikhali jikelele kwendlela enye yokuphefumula kwe-anaerobic yile:
C 6 H 12 O 6 → 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 + amandla
Utshiso luhlobo lweMichimo yeMichiza
Ukutshisa ngumonakalo wemichiza kwimpilo yemihla ngemihla. I-WIN-Initiative / Getty Izithombe
Njalo xa udlala umdlalo, utshise ikhandlela, wakhe umlilo, okanye ukhanyise i-grill, ubona ukuphendulwa komlilo. Ukutshisa kudibanisa iamolekyu enamandla kunye ne-oksijini ukuvelisa i-carbon dioxide kunye namanzi.
Ngokomzekelo, ukusabela komlilo wepropane, okufunyenwe kwi-grills kunye nezinye iindawo zomlilo, kukuba:
C 3 H 8 + 5O 2 → 4H 2 O + 3CO 2 + amandla
Ukugqithwa yiMicrosoft Common reaction
Alex Dowden / EyeEm / Getty Izithombe
Ngexesha elide, isinyithi siqala ukutshiza okubomvu, okugqithisileyo okubizwa ngokuba yimvutha. Lo ngumzekelo wempendulo ye-oxidation . Eminye imizekelo yemihla ngemihla ibandakanya ukwakheka kwe-verdigris yobhedu kunye nokuqhawula isiliva.
Nantsi i- equation yamakhemikhali yokugquma kwesinyithi:
Ukuxuba amaKhemikhali kubangele ukuphendula kweMichiza
I-Baking Powder kunye ne-baking soda zenza imisebenzi efanayo ngexesha lokubhaka, kodwa zisabela ngokwahlukileyo kunye nezinye izithako ukuze ungeke ubeke enye indawo kwenye. Nicki Dugan Pogue / Flickr / CC BY-SA 2.0
Ukuba udibanisa iviniga kunye ne- baking soda kwi-volcano yamachiza okanye ubisi kunye ne-baking powder kwi-recipe ufumana ukufuduka kabini okanye ukuphendulela kwe-metathesis (kunye nabanye). Izithako ziphinde zivelise ukuvelisa i- carbon dioxide igesi kunye namanzi. I-carbon dioxide ifom i- bubble e-volcano kwaye inceda iimpahla eziphekiweyo .
Ezi mpendulo zibonakala zilula kumsebenzi kodwa kaninzi ziqukethe amanqanaba amaninzi. Nantsi i- equation yeekhemikhali jikelele malunga nokuphendula phakathi kwe-baking soda kunye neviniga:
HC 2 H 3 O 2 (aq) + NaHCO 3 (aq) → NaC 2 H 3 O 2 (aq) + H 2 O () + CO 2 (g)
Iibhetri Ziyimimiselo ye-Electrochemistry
U-Antonio M. Rosario / I-Bank Image / Getty Izithombe
Iibhetri zisebenzisa i- electrochemical okanye i-redox ukusabela ukuguqula amandla ekhemikhali ibe ngamandla kagesi. Ukuphendula ngokuphindaphindiweyo kwe-redox kwenzeka kwiiseli ze-galvanic , ngelixa iimeko ezingapheliyo zamakhemikhali zenzeke kwiiseli ze-electrolytic .
UPeter Dazeley / UCopter's Choice / Getty Izithombe
Izigidi zeempendulo zamakhemikhali zenzeka ngexesha lokutya. Ngokukhawuleza xa ubeka ukutya emlonyeni wakho, i-enzyme ematheni akho abizwa ngokuthi i-amylase iqala ukudiliza ushukela kunye nezinye i-carbohydrates kwiifom ezilula umzimba wakho unako ukuwuthatha. I-Hydrochloric acid esiswini sakho siphendula ngokutya ukusidiliza, ngelixa i-enzyme iyanamathela amaprotheni kunye namafutha ukuze ikwazi ukungena kwigazi lakho ngeendonga zamathumbu.
Xa udibanisa kunye ne-asidi kunye nesiseko, ityuwa yenziwa. I-Lumina Imaging / Getty Izithombe
Nanini na xa udibanisa i-asidi (umzekelo, iviniga, ijusi lemon, i- sulfuric acid , i- muriatic acid ) ngesiseko (umzekelo, i- baking soda , isepha, i-ammonia, i-acetone), wenza isenzo se-acid-base reaction. Ezi mpendulo ziyanciphisa i-asidi kunye nesiseko sokuvelisa ityuwa namanzi.
I-chloride ye-sodium ayiyena yodwa ityuwa engabunjwa. Ngokomzekelo, nanku ukulingana kwamakhemikhali kwindlela yokusabela e -asidi eyenza i-potassium chloride, ityeyibhile efanayo yendawo yetyuwa:
HCl + KOH → KCl + H 2 O
Iziphulo kunye neethambo
JGI / Jamie Grill / Getty Izithombe
Iziphulo kunye neenkunkuma zihlambulukile ngendlela yokuchithwa kwamakhemikhali . I-soap imulsifies grime, oku kuthetha ukuba iinqwelo ezinamafutha zibopha isepha ukuze zikhutshwe ngamanzi. Amagqabantshintshi asebenza njengama-surfactants, anciphisa ukungabikho komhlaba kwamanzi ukuze asebenzisane namafutha, azihlukanise, aze ahlanjululwe.
Ukuphendula kweMichiza ekuPhileni
Ukupheka yinto enkulu enkulu yokwenza i-chemistry test. UDina Belenko Photography / Getty Izithombe
Ukupheka kusetyenziswa ubushushu ukuze kubangele utshintsho lweekhemikhali ekudleni. Ngokomzekelo, xa unzima ukubilisa iqanda, i-hydrogen sulfide eyenziwa ngokufudumala i-egg ephuzi ingasabela ngesinyithi kwi-yolk yolanga ukuze yenze i- ring -green green ring around the yolk . Xa unobumba obomdaka okanye iimpahla eziphekiweyo, impendulo ye-Maillard phakathi kwama-amino acids kunye noshukela ivelisa umbala obomvu kunye ne-flavour e nqwenela.
Ziziphi iinjineli zeeMichiza zenze ntoni kwaye zininzi kangakanani?
I-Kemistry Laboratory I-Glassware I-Word Search
I-Simple Chemistry Life Hacks
Indlela iPenny Enokwenza Ngayo Iwayini Iphunga neNtoko
Kutheni Ufuna Ukufunda Ubunjiniyela?
I-Bleach kunye noTywala benza iCloroform
Iisiseko zokusebenzisa iLabbon Fiber Laminates
I-Chlorine Bleach Shelf Life
Ikhaya leKhemistry ye-De-Icing Windshield yakho
Iimpawu zeHiddenite - Imerald Imayini engamanzi
Kutheni Iingcingo Zenza Ukutshintsha Kwemfino Yakho Yomthi
Ngubani Onganyulwa Ngopapa?
Indlela yokusebenzisa iBelly Putter
Uluhlu olunzulu lweziseko
Violaciones migratorias por las que teededar deportar o expulsar
Iindlela ezili-8 zokunyusa i-Your Span Attention
Iingcamango zeProjekthi yeSayensi yeNzululwazi: Imemori
Admissions College College
Isikhokelo sokudibanisa isenzi sesiFrentshi 'Chanter' (ukucula)
UMary Custis Lee
I-Yamaha RD Uhlobo lweeMoto
Ukwesaba kwe-Atmosphere: I-Phobias ehlobene neMozulu
Imbali ye Quito
Inkcazo yeAlkenyl Group
I-American Revolution: iMfazwe yaseBunker Hill
UkuHlanganisa isiGaba seMidlalo
Indlela Yokulungisa Iisombululo Zeekhemikhali
Uthando lwePaptop - Izikhwama, iPacks kunye neeRacks zokuThatha iWindows kwikhompyutha yakho
I-Yips: Nakhu okuyiyo, kwaye awufuni